China S308 Isantya esiphakamileyo esijikeleze ibhotile yokuphawula umatshini wokuvelisa kunye nefektri | I-S-conning
Isebenza kwiintlobo ezahlukeneyo zokukroba (iintlobo ezahlukeneyo zeebhotile. Iibhotile zolwelo zomlomo, iibhotile njlnjl), kunye nobubanzi be-10mm-30mm (okanye ubungakanani obulungiselelwe wena)
I-S308 High Speed ​​vial labeler ye-label yonyango yokuvelisa inaliti ene-teknoloji entsha kunye neyona ndlela ikhawulezayo yokulawula i-netcon (ngokuzithandela). Ngokucofa nje isikrini sayo esinye sokuchukumisa, unokuhlengahlengisa ngokulula useto olwahlukeneyo lweemfuno zemveliso yakho.
Ukwamkela isantya esiphezulu (iJapan / iFrance / i-USA)) inkqubo yeelebheli ze-servo;
-Isebenza kwiintlobo ezahlukeneyo zokukroba (iintlobo ezahlukeneyo zeebhotile. Iibhotile zolwelo zomlomo, iibhotile njl njl), kunye nobubanzi be-10mm-30mm (okanye ubungakanani obulungelelanisiweyo);
Inkqubo yokucacisa ephezulu, ngokuchaneka kwelebheli 1mm; Isantya esizinzileyo:> 400 ~ 800 iibhotile / ngomzuzu;
Izinga lomonakalo elingaphantsi kwe-1 / 300,000;
Inkqubo yolawulo olukrelekrele yokuqinisekisa ukuba akukho mibimbi xa kufakwa iilebheli kwaye akukho bubble zomoya zeelebheli ezibonakalayo;
-Iinkqubo zokuhlola ezininzi ezikrelekrele, ngokudityaniswa okugqibeleleyo kwesantya esiphezulu, ukuchaneka, uzinzo kunye nokuthembeka
Amandla aphezulu ealuminium, ngokubonakala okuhle kunye nokuthotyelwa kweemfuno ze-cGMP, i-FDA, i-OSHA, i-CSA, i-SGS kunye ne-CE.
- I-Rotary & Roller turntable eneendawo ezintathu zokubeka umsebenzi ochanekileyo kunye nozinzo lwelebheli;
-Iinkwenkwezi ezinamavili zilahla isixhobo zinokufumana ngokuchanekileyo kwaye zisuse iimpazamo izinto ezilandelelweyo; xa kusebenza ngesantya esiphezulu.
-Isixhobo sokufumanisa ividiyo ukubonelela ngemisebenzi eyahlukeneyo yokufumanisa: Ukuphawula iilebheli, ukufumanisa ukuvuza, kunye nokuprinta ikhowudi yokufumanisa, iimpahla ezingekho mgangathweni ziya kususwa ziphinde zisetyenziswe.
-Ungakhetha isantya esiphezulu somatshini wokunyathela oshushu, umshicileli wokuhambisa ubushushu okanye umatshini wokuprinta we-inkjet ukuqonda ikhowudi ngokulandelelana;
-Ukuxhasa izixhobo eziqhuba ngobume kunye nolwazi lwealam kungangumboniso wexesha lokwenyani kwinkqubo.
Umatshini wethu nabaqhubi be-servo bazisa iileyibhile ezichanekileyo kunye nesantya esiphindaphindayo. Isilungisi esinamavili esandla esifikeleleka ngokulula kunye nolungelelwaniso lomgaqo kaloliwe osecaleni uvumela "ixesha elongezelelekileyo" kumgca wakho wemveliso! I-S308 isetyenziswa kuwo onke amashishini anje ngamayeza, iimveliso zokhathalelo lomntu, ukutya, iivithamini, izinto zokuthambisa, kunye neekhemikhali, apho ukuthembela okukwinqanaba eliphezulu kungumyalelo wokuvelisa ngokufanelekileyo.
Isilawuli sokuhamba rhoqo kwesiguquli esiqinisekisiweyo siqinisekisa uzinzo lwesantya kunye nereyithi yokuchaneka eyi- ± 0.5mm.
Isikhokelo sikaloliwe salo mgca wokuvelisa isitofu sokuthintela isitofu senziwe nge-aluminium ekumgangatho ophezulu egutyungelwe ngeplastikhi enxibe nzima ukuze kuqinisekiswe iileyibhile ezichanekileyo kunye nokukhuselwa kwemveliso, ukugcina imveliso yomthengi inomdla kwaye ikwimeko egqibeleleyo.
Ubukhulu (L) 2208 x (W) 1420 x (H) 1948mm
Ubungakanani besikhongozeli Φ10-30mm
Egqithileyo S921 Isantya esiphezulu sebhubhu ethambileyo
Okulandelayo: S307 Isantya esiphezulu somatshini wokuphawula i-vial
Umatshini wokuTywina wePlastiki, Umshicileli weLayibhile yeeBhotile zeJar, Indibano yesirinji kunye neNkqubo yokuPhawula, Umatshini wokuPhawula iBhotile yoRhwebo, Phezulu kunye nasezantsi kwelebheli, Umatshini wokufaka iilebheli kwiibhokisi,